5 taona lasa izay dia tena mbola tanatin’ny sazy i Madagasikara ary nanamarika ny asa natao ny fiverenana tanatin’ny fianakaviana iraisam-pirenena. Anisan’ny namerina ny firenena Malagasy tamin’ny maha izy azy ny antenimieram-pirenena, hoy izy. Tokony hiainga anatin’ny fotoana fohy ny toekaren’i Madagasikara ary ho an’izay tia tanindrazana dia tsy tokony ho tafandrimandry raha mbola miaina anaty fahantrana tahaka izao ny firenena. Ny otrikaren’i Madagasikara dia efa ampy ahatongavana sahady amin’ny fampandrosoana. Olana ny tsy fisiana sy ny tsy fahampian’ny vola eto amin’ny firenena, hoy izy ka izany no tokony himatimatesana. Tsy ampy ny fampidiran-ketra ka izay no hihazakazahana amin’ny fiaraha-miombon’antoky ny fanjakana sy ny tsy miankina. Io no hilofosana satria ny fiaraha-miasa misy fetrany hatrany ary rehefa tsy mahomby dia azo ajanona. Mbola nanamafy ny maha zava-dehibe ny tetikasa Andrakaka any Antsiranana ihany koa izy izay tena ilain’ny firenena marefo tahaka an’i Madagasikara satria hitarika fampandrosoana makadiry.